Zonke ezi ndaba zibandakanyiwe kwi-iOS 10 beta 2 | IPhone iindaba
Zonke ezi ndaba zibandakanyiwe kwi-iOS 10 beta 2
Izolo emva kwemini, ngeyure zalo eziqhelekileyo, iApple isungule iOS 10 beta 2. Njengalo lonke ixesha besungula i-beta yayo nayiphi na inguqulelo x.0, i-beta entsha ye-iOS 10 ibandakanya iinguqu ezininzi, ezinye zibetha ngakumbi kwaye ezinye zilungisa kuphela i-bug eyayikho kuhlobo lwangaphambili. Kule nqaku ungabona zonke iindaba ze-iOS 10 beta 2, okanye ubuncinci konke esikufumene ukusukela izolo emva kwemini / ngobusuku eSpain.
Phambi kokuba ndiqale, ndingathanda ukuthi ii-skrini kule post zithathiwe kwi-iPad kuba okwangoku ayibonakali ngathi licebo elihle ukuyisebenzisa kwi-iPhone yam kuba ndixhomekeke kuyo kwimisebenzi ethile. Mhlawumbi ndiza kufaka i-iOS 10 kwi-iPhone yam xa bekhupha i-beta yoluntu, enokuthi ibe kwiiveki ezimbini. Apha ngezantsi unayo uluhlu lweendaba ibandakanyiwe kwi-iOS 10 beta 2.
Yintoni entsha kwi-iOS 10 beta 2
I-headphone port iyasebenza kwakhona (ingxaki yobuqu).
Xa uthatha umfanekiso-skrini, isixhobo asilali (ingxaki yobuqu).
Sinokuphinda sichwetheze ngokutsala umnwe wethu ukusuka kuShift okanye ukufaka amanani ngaphandle kokuphakamisa umnwe (ingxaki yobuqu).
Inketho entsha ngaphakathi kwemiyalezo yesicelo sokukhuphela isoftware ehambelana nayo kwiVenkile ye App.
Ivenkile yeApple ixhasa ukwahlula isikrini kwiPro Pro.
Uhlengahlengise iqhosha elithi "Hluza" kwiPosi
Utshintsho lokutshintsha phakathi kweekhamera eziphambili neziphambili zikhawulezile.
Ukubakho kokususa isicelo seNoticias (Iindaba), into engeyomfuneko kumazwe afana neSpain 😉
Inketho yokuthumela imifanekiso kwisisombululo esisezantsi ngeMessage ukugcina idatha.
Inketho entsha xa ucinezela iithokheni kwi-Safari ukuvula ithebhu entsha.
Ukuvula inqaku lokuvula ngokuzenzekelayo kwi-Mac liya kuhlaziya ngokuzenzekelayo kwi-MacOS Sierra.
Xa ubiza uSiri, ngoku ubona oopopayi abancinci abanciphisa usetyenziso esikulo (okanye iscreen sasekhaya).
I icon yeKhayaKit iguqulwe kwiZiko loLawulo nakwiseto.
Isandi esitsha sekhibhodi siyanyamalala. Isandi esidala sibuyile.
Sebenzisa i-3D Touch kwifolda ekwiskrini sasekhaya ngoku kubonisa iibhaluni ngeapps. Ihlala ibonisa ukubala ngokubanzi.
Inketho yokukhubaza i-AirDrop ngoku "ukwamkelwa kukhubazekile".
Isitophuwashi ngaphakathi kwenkqubo yewotshi iya kudijithali kwakhona.
Ubungakanani bokubhaliweyo ngoku bukuku Useto / Umboniso kunye nokuqaqamba.
Iifayile zoopopayi zitshintshiwe kancinane.
Iifolda ngoku zicace gca.
Ngoku sinokufikelela kwiwijethi ezivela kwiZiko leSaziso ngokuswayipha ngasekunene.
I-icon ye-Apple TV kukhetho lwe-AirPlay yeZiko loLawulo itshintshiwe.
Inike igama kwakhona icandelo "loMculo okhutshelweyo" waba ngu "Ukhuphelo" ngaphakathi kwesicelo soMculo.
Isicatshulwa esincinci kwi-app yoMculo.
Iimephu zibandakanya ukhetho ku "Bonisa imoto emileyo" kunye nenkcazo yendlela elisebenza ngayo eli nqaku.
Iimpawu ezintsha kunye nokubhaliweyo okuhlaziyiweyo kwimpawu ezintsha ze-3D.
Ukhetho lokudlala ngokungacwangciswanga umculo luyafumaneka kwakhona.
Ngoku, xa sivula isixhobo ngaphandle kokungena kwiscreen sasekhaya, siza kubona isicatshulwa esithi "Kuvulwe".
Isithuba kwimbali yokufowuna sonyuke kancinane.
Amawijethi eqela lesithathu akhangeleka ngcono, ngaphandle kokunqunyulwa.
Isicelo se- «Ingxelo» siyafumaneka kubasebenzisi abaninzi.
Ukhetho oluzenzekelayo lokukhiya ngoku luku "Bonisa kunye nokuqaqamba".
Olunye uhlobo lokuthinta kwe-3D lusebenza kwizixhobo ngaphandle kwescreen se-3D ukuba senza umda omde.
Iindawo ezarhoqo ngoku ziphawulwe kwiiMaphu.
Yongeze "iNqaku elitsha" njengokhetho olunqumlayo lwe-3D kwisicelo seNqaku.
Ukuphuculwa kwesantya kunye nozinzo lwenkqubo.
UApple uthe kwi-WWDC edlulileyo ukuba i-beta kawonke-wonke ye-iOS 10 izakufika ngoJulayi. Kunyaka ophelileyo idibene ne-beta 3 yabaphuhlisi, inguqulelo, ukuba ikhutshwe kwixesha elibekiweyo eliqhelekileyo (kwaye ayithandi le beta yesibini) iya kufika kwiveki kaJulayi 18. Inkqubo ye- Uhlobo lokugqibela luya kufika ngoSeptemba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 10 » Zonke ezi ndaba zibandakanyiwe kwi-iOS 10 beta 2
Ulwazi olugqwesileyo enkosi. Kwiiwebhusayithi ezininzi bazinikezele ekubekeni iindaba ze-ios 10, hayi le yale beta.
Phendula ku juanyoyohmenendez
Kwaye ukuba bayayinyusa indlela 'apho sipaka' isebenza ngayo
Ukwahlulwa kweendaba ezimnandi, njengoko isitsho isinxulumani-somhlobo sisitsho.
Ndiyifakile kwaye ndiyikhuphe kwakhona.
Ukungaphumeleli okuyintloko kwi-iPhone yam kukuba izaziso azifiki ngokuchanekileyo, ngakumbi kwiMiyalezo.
Nangona kunjalo iApple Music iye yandisa iimenyu zayo kwaye ngoku inokusetyenziswa ngesiqhelo, ukwenza imisebenzi emininzi akusathintithisi, ukuvala isikrini kunamanzi ngakumbi kuzo zonke iisetingi ... kunye nezinye iinkcukacha endingangeni kuzo.
Iposi elungileyo kakhulu, imibuliso.
Iifolda aziphantse zilingane ngoku?
I-PS: Ndiyathemba ukuba isandi sebeta ye-beta 1 iya kubuya ...
Qhagamshela ukukhuphela i-beta2 yamvanje ye-iOS 10 nceda
Ndiyayonwabela usetyenziso lweendaba eSpain. Phila ixesha elide!
I-iPhone 7 iza kuza ne-32 GB kuhlobo lwayo olusisiseko
Ukurekhoda kwelizwi Pro, simahla ixesha elilinganiselweyo